Ciraaq iyo Tunisia oo ka heshiiyey diyaarado uu adeegsan jiray Saddam Hussien oo fadhiyey… – Hagaag.com
Ciraaq iyo Tunisia oo ka heshiiyey diyaarado uu adeegsan jiray Saddam Hussien oo fadhiyey…
Posted on 6 Febraayo 2020 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Guddoomiyaha gobolka Tozeur ee Tunisia, Ayman Al-Bejawi, ayaa wuxuu xaqiijiyay in mas’uuliyiinta Ciraaq ay ogolaadeen inay siiyaan mas’uuliyiinta dalkiisa 4.8 milyan euro (qiyaastii 5.4 milyan oo doolar) si loogu xalliyo lacagaha maaliyadeed ee loogu talagalay adeegyada labada diyaaradood ee madaxweynaha oo fadhiday garoonka caalamiga ah ee Tozeur-Nefta in ka badan 29 sano.
Waxaa la filayaa in kooxda reer Ciraaq ay kala tashan doonaan shirkadda asalka ee labada diyaaradood, oo ay ku jiraan diyaaradda Boeing 747 Jumbo oo uu adeegsadan jiray Madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein suurtagalnimada in lakala furfuro maadaama aan la isticmaalin muddo ka badan 29 sano.
Wasiirka Gaadiidka Ciraaq, Abdullah Laibi, ayaa horey u shaaciyay in heshiis la gaarey si loo xalliyo arrinta labada diyaaradood ee Ciraaq ee lagu dejiyay garoonka diyaaradaha ee Tunisia lana soo afjaro feylasha lacageed ee laga diiwaangaliyay Ciraaq iyaga dartood.
Kuwait ayaa waxay dacwad u gudbisay Qaramada Midoobay, taas oo ay ku eedaysay dawladii Ciraaq muddadii Saddam Hussein in ay badashay matoorradii diyaaradaha fadhiya dalka Tunisia kuna bedeshay mid ka mid ah diyaaradihii laga lahaa Kuwait oo uu qabsaday, taas oo ku kaliftay Qaramada Midoobay in ay soo saarto go’aan lagu xirayo labadaas diyaaradood, taas oo ka hor istaagtay mas’uuliyiinta Tunisia in ay u dhiibaan mas’uuliyiinta Ciraaq Bilowgii. Kadib xaqiijinta matoorada, Qaramada Midoobay waxay ku wareejisay Kuwait mid kamid ah matoorrada si loo soo afjaro dhibaatada udhaxeysa Ciraaq iyo Kuwait.
Waxaa xusid mudan in labada diyaaradood loo wareejiyay dalka Tunisia ka hor dagaalkii labaad ee Khaliijka bilowgii 1991, waxayna kusii nagaayeen garoonka diyaaradaha ee Tozeur ee koonfurta Tunis ilaa iyo waqtigaas, iyadoo la og yahay inayan diyaar u aheyn in la duuliyo.